IKLABHU YASESAM NGOKU IBONELELA NGEENTYATYAMBO ZOMTSHATO-KWIBHOKISI ENYE ENKULU - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato Iklabhu yaseSam ngoku ibonelela ngeentyatyambo zoMtshato-Kwibhokisi enye enkulu
Iklabhu yaseSam ngoku ibonelela ngeentyatyambo zoMtshato-Kwibhokisi enye enkulu
(Ityala: Iklabhu kaSam)
Ngu: Joyce Chen 04/18/2019 kwi-5: 01 PM
Amaqabane acinezelwe ixesha-kunye nemali-bayazi ukuba yonke into encinci iyanceda xa kufikwa ekugcineni zombini ngexesha lokucwangcisa umtshato. Sam's Club, megastore mhlawumbi eyaziwa kakhulu ngeepakethe zokuthengiselana ngeetawuli zamaphepha kunye neTupperware, inethemba lokunceda ukuba-yi-weds xa kusondela usuku lwabo olukhulu ngokunikela ngexesha elikhulu kunye nenkonzo yokonga imali: iintyatyambo zebhokisi.
Ngokwentetho, iklabhu kaSam ithi oomolokazana banokugcina naphi na ukusuka kwiipesenti ezingama-20 ukuya kuma-40 xa bathenga ngobuninzi (kwaye mhlawumbi nangaphezulu kuxhomekeke kwindidi!), Yiyo loo nto ibonelela ngaphezulu kwe-1,600 yeentyatyambo ezahlukeneyo zoomakoti bajonge Chitha imali encinci kwiintyatyambo zee-bouquets, ii-boutonnieres, ii-corsage, njalo njalo.
Olunye lolona khetho ludumileyo kwiSamsClub.com zezi ezikhethiweyo, eziqokelelweyo zomtshato eziqokelelweyo , Ezibandakanya zonke iziqwenga eziyimfuneko kumtshato omnandi, zonke zipakishwe kakuhle kwibhokisi enkulu enkulu.
Ingqokelela yemitshato engama-17 ibandakanya isipha esinye somtshato, iintyatyambo ezine zomakoti, isipha esinye esilahliweyo (esilungele ukuphoswa kwesipha ekupheleni kobusuku), ii-boutonnieres ezintandathu, ii-corsage ezine, ibhokisi enye yeepalali, kunye neseti enye yeeklipa, kwimeko apho naziphi na iziqwenga zifuna ukulungiswa. Amaxabiso aqokelelweyo asusela kwi- $ 200 ukuya kwi-1,200 yeedola, kuxhomekeke kwiintyatyambo ezisetyenzisiweyo.
Kukwakho, ngoncedo, uluhlu olubanzi lwemibala yeephalethi kunye neentlobo zeentyatyambo zokuncoma iintlobo ezahlukeneyo zemitshato kunye nezinto ozikhethayo, kubandakanya ingqokelela yeRustic Chic eneentyatyambo eziluhlaza okwesibhakabhaka kunye nezimvi ukuze ususe iziqhamo ezininzi eziluhlaza; ingqokelela yeBohemian Chic eneentyatyambo ezixutywe ngaphakathi kunye neentyatyambo ezininzi ze-eclectic; kunye nenketho ye-White Rose eqhelekileyo.
Iklabhu yaseSam ide inikezele iphakheji entsha yokuvota oko kubandakanya inani elincinci lamaqhekeza, alungele umsitho osenyongweni. Ixesha elicetyiswayo lokukhokela kuyo yonke iodolo kukuhanjiswa kweentsuku ezimbini ngaphambi komtshato, abatshakazi banakho ukuodola ukuya kwiintsuku ezingama-30 ngaphambi kokuba bazise iintyatyambo zabo.
Simi ngasemva komgangatho wethu ngesiqinisekiso seentsuku ezisixhenxe esitsha kwientyatyambo ezisikiweyo, itsho i-megastore ekukhululweni. Ukuba imveliso yakho ayihlali iintsuku ezisixhenxe, siya kuyibuyisela into oyithengileyo!
Khusela umbono wakho ofanelekileyo womtshato ngokuqalaUhlobo lweKnot's Quiz.
indlela yokubopha iqhina
izimvo zedesika eyakhiweyo
imibono yosuku lokuzalwa komamazala
mangaphi amadoda abalaseleyo onokuba nawo